စုချစ်သူ: October 2009
တချို့ကပြောကြတယ်။ အဘိုးအဘွားနဲ့ နေခဲ့ရတဲ့သူတွေဟာ ကံကောင်းတဲ့သူတွေ တဲ့။ သာဆိုရင် ကိုယ်ကတော့ ကံကောင်းတဲ့ အထဲမှာ ပါနေတဲ့သူလို့ ပြောရမယ်။ အဖေ့ဘက်က အဘိုးအဘွားကို မမြင်ဖူးလိုက်ပေမဲ့ လူမှန်းသိတတ်စကတဲက အမေ့ဘက်က အဘိုး၊ အဘွားနဲ့ အတူနေ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်။
ကံကောင်းတာကတော့ ရှေးစကားတွေ ကြားရသာပေါ့လေ။ အမေကြီးတို့ဘက်က စကားပြောရင် စာသံပေသံ၊ ကာရန်နဘေနဲ့ ပြောတတ်တယ်။ အမေကြီးရဲ့ အမေ ဘွားဘွားကြီးကိုလည်း မှီလိုက်သေးတယ်။ ကိုယ့်အသက် ၈နှစ်လောက်မှ ဘွားဘွားကြီး အသက် ၉၈နှစ်မှာ ဆုံးသွားခဲ့တာ။ ဘွားဘွားကြီးကလည်း စကားကို ကာရန်နဘေနဲ့ ပြောတာပဲ။ သူ့သားမက် အဖေကြီးက လျက်ဆားတွေစားပြီး အီးအရမ်းပေါက်တာပဲ။ နေ့လည် နေ့ခင်း ထမင်းစားပြီး အဖေကြီး၊ အမေကြီးက အိမ်အပေါ် ထပ် မှာ တရေးတမော အိပ်နေကြတာကို... မောင်တော် နှမတော် စက်တော်ခေါ် အီးတော် ဖင်က တဘွတ်ဘွတ် လို့... ကိုယ်တို့ မြေးတွေနဲ့ ၀ိုင်းဖွဲ့စကားပြောရင်း ဘွားဘွားကြီးက စာစပ်ပြီး အတင်းတုတ်တယ်။ ပြီးရင် သူစပ်တဲ့စာလေး သူ့ဘာသာသဘောကျပြီး တခွိခွိနဲ့ ရယ်တော့သာ။
ပြီးရင် ကိုယ်တို့ မောင်နှမ၄ယောက်က အထူးအဆန်း ကစားနည်းမျိုးစုံနဲ့ ကစားကြသယ်။ အဲသာကို ဘွားဘွားကြီးက ထူးပေသည် ဆန်းပေသည် ဦးရွှေစံမြေးတွေသည် လို့ စာစပ်တယ်။ ဆုံးသွားတဲ့ သူ့ယောက်ျား ဘိုးဘိုးကြီးနံမည်က ဦးစံကိုး။ သူ့ယောက်ျားနံမည်လေးပါ ပါအောင် စပ်ရှာတာ။ နောက်တော့ ဘွားဘွားကြီး မတော်တဆ ခြေထောက်ကျိုးပြီး အိပ်ရာထဲလဲ... အဲသာကနေ မထနိုင်တော့ပဲ ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ ဆုံးတာလည်း ညင်ညင်သာသာပဲ... အဲဒီနေ့နံနက်က သူ့ဘာသာ အိပ်ရာကနေ မနိုးတော့တာ။
အဖေကြီးကတော့ စိတ်အရမ်းတိုတတ်တဲ့သူ။ စိတ်လဲကောက်တတ်တယ်။ သူ့သားသမီးတွေ၊ မြေးတွေကို ဘယ်သူ့ကိုမှ နံမည်မခေါ်ဘူး။ ကလေးလို့ဘဲ ခေါ်တယ်။ ညဖက်စာကျက်နေတဲ့ ကိုယ်တို့တွေ မအိပ်မချင်း ခဏခဏ ထကြည့်တတ်တဲ့သူ။ ပြီးရင် သူက သူနဲ့ အတူလာအိပ်ခိုင်းတတ်တယ်။ အဖေကြီးက အီးတဘူဘူပေါက်တဲ့သူမို့ ကိုယ်တို့တွေ ဘယ်သူမှ သူနဲ့ အိပ်ချင်ကြဘူး။ ပြီးရင် ည ဘယ်လောက် ညဉ့်နက်နက် မနက် ၃နာရီဆို ဘုရားရှိခိုးဖို့ ထတာပဲ။ ပရိတ်ကြီး ၁၁သုတ်၊ ဓမ္မစကြာ၊ ပဋ္ဌာန်း ရှိသမျှ အကုန်ရွတ်တာပဲ။ ရွတ်ပြီး ၅ခွဲ၊ ၆လောက်မှ ပြန်အိပ်တာ။
သူက ကိုယ်တို့ အကစားမက်တာကို မကြီုက်ဘူး။ အဲဒီတော့ သူ့ရဲ့ ရှိသမျှ နှုတ်လို့ရသဲ့ အမွှေးမှန်သမျှ (နှာခေါင်းမွှေး၊ မုတ်ဆိတ်မွှေးစတာတွေကို) မွှေးညှပ် တချောင်းနဲ့ နှုတ်ခိုင်းတော့တာပဲ။ မရှိတော့ပါဘူး... ကုန်နေပီပြောလဲ မရဘူး။ အသားထဲ စိုက်ဝင်နေသာကို အတင်းစမ်းပြီး ဒီမှာ ရှိသေးတယ်... ရအောင်နှုတ်လို့ လုပ်တတ်တယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ သူက အသက် ၅၀လောက်ကတဲက ဇာကနာလို ဂတုံးတုံးပြီးနေတဲ့သူ။ အဲသာကြောင့် ဆံပက်ဖြူနှုတ်ရတော့ သက်သာသွားတယ်။ အမွှေးနှုတ်လို့ ကုန်ရင် နင်းရတယ်။ မပြီးနိုင်မစီး နိုင် တမေ့တမောကြီးပဲ နင်းနေရတာ... ငယ်တုန်းက သိပ်စိတ်ညစ်ခဲ့တာပေါ့။ သာပေမဲ့ သူ့စိတ်ကြိုက် လုပ်ပေးပြီးသွားရင် မုံ့ဖိုးကိုတော့ မြိုးမြိုးမြက်မြက်လေး ပေးလေ့ရှိတယ်။ အဖေကြီးက ၂၀၀၄ခုနှစ် အသက် ၁၀၁နှစ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။
အမေကြီးက ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အသက် ၁၇နှစ်မှာ အိမ်ထောင်ကျခဲ့လို့ ဆုံးခန်းတိုင် စာမသင်ခဲ့ရပေမဲ့ အရမ်းခေတ်မှီတယ်။ သတင်းစာဆို နိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးသတင်းတွေကိုမှ အရင်ရွေးဖတ်တဲ့သူ။ ပြီးတော့ သူက သူ့မြေးတွေရဲ့ သာမည စွမ်းဆောင်ချက်လေးတွေကို သဘောတကျနဲ့ ဘယ်လို အသိအမှတ်ပြုပေးရမယ်ဆိုတာ နားလည်တဲ့သူ။ အမေကြီးက အနုပညာ အာရုံခံစားမှုလည်းကောင်းတယ်။ စာသံပေသံ ကာရန် နဘေနဲ့ ပြောတတ်သူဆိုတော့ ကဗျာလည်းဝါသနာပါတယ်။ ကိုယ်ကျောင်းတုန်းကရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာစာအုပ်လေးတွေကို သူက ယုယုယယနဲ့ သိမ်းထားတတ်တဲ့သူ။ ကိုယ်ဆွဲတဲ့ ပန်းချီကားတွေကို သေချာသိမ်းထားပြီး ဧည့်သည်လာတိုင်းထုတ်ကြွားတဲ့သူ။ ကိုယ်ထိုးပေးတဲ့ သိုးမွှေးတဘက်ကိုမှ အကောင်းလုပ်ပြီး ကုသိုလ်ရအောင် ဘုရားရှိခိုးတိုင်း ခြုံတတ်တဲ့သူ၊ ကိုယ်ချုပ်ပေးတဲ့ အဘွားကြီးအင်္ကျီလေးကို ဘယ်လောက်ဟောင်းဟောင်း မမေ့မလျော့ ထုတ်ဝတ်တတ်တဲ့သူ။ အမေကြီးက အခုလာမဲ့ ဒီဇင်ဘာမှာ အသက် ၉၉နှစ်ပြည့်မယ်။ သူ့အတွက် ထူးထူးခြားခြား အလှူလေးလုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်။
ရှေးလူကြီးတွေဆိုတော့ အဖေကြီး၊ အမေကြီးတို့နဲ့ နေရတာ အနေအထိုင်တော့ အတော် ကျဉ်းကြပ်ခဲ့တယ်။ စကားပြောတာတွေ ဆင်ခြင်ရတယ်။ ဇမ္ဘူဒီပါလက်ယာတောင်ကျွန်း သြဘာနမိတ်ထွန်းတဲ့။ ကျက်သရေမရှိ၊ မင်္ဂလာမရှိတဲ့ စကားမျိုးမပြောရဘူး။ ဒုက္ခပါပဲ၊ သေတော့မှာပဲ၊ သေချင်တယ်၊ လုပ်ကြပါဦး ... စတဲ့ ... စတဲ့ စကားမျိုးလုံးဝမပြောရဘူး။ မတော်တဆ ပြောမိရင် အဲသာ အဆူကောင်းကောင်းခံရပြီပဲ။ အလန့်တကြား အာမေဋိတ်တောင် မလုပ်ရဘူး။ ဆံပင်ကို ဖါးလျားမချရဘူး။ စည်းထား၊ ထုံးထားရတယ်။ ဖားလျားချတာ အပူသည်တွေလုပ်တာတဲ့။ ပြီးတော့ အမြဲလဲ အုန်းဆီရွှဲနေအောင်ထည့်ရသယ်။ ဆီမရှိတဲ့ ပြောင်းဖူးမွှေးဆံပင်က ဆင်းရဲသားတွေတဲ့။
ဘုရားစင်ရှေ့ အကြောင်းမရှိပဲ မသွားရဘူး။ ခြေဆင်းမထိုင်ရဘူး။ ဒူးပေါ်မေးမတင်ရဘူး။ မေးမထောက်ရဘူး။ ခါးမထောက်ရဘူး။ ခြေမချိတ်ရဘူး။ မပြေးရဘူး။ ခြေနင်းမကြမ်းရဘူး။ မီးဖိုချောင်ထဲ ဟင်းချက်ရင်း သီချင်းမညည်းရဘူး။ မိန်းမကောင်းဆိုတာ သွား၎ချောင်းပဲ ပေါ်အောင်ပြုံးတတ်ရမတဲ့။ ထမင်းစားရင် ပန်းကန်ပြောင်အောင်မစားရဘူး။ ပြတ်ပြတ်မမြည်ရဘူး။ ထမင်းစားရင်း စကားမပြောရဘူး။ စတာ... စတာတွေ အများကြီးပဲ။ အ၀တ်အစားနဲ့ ပါတ်သက်လို့တော့ လက်ပြတ်မ၀တ်ရ၊ လည်ဟိုက်မ၀တ်ရ၊ ထမီအင်္ကျိပြောင် အနီ၊ အနက် မ၀တ်ရတဲ့။
အမေကြီးက ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမတွေထက် မြင်ြ့မတ်တယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ အိမ်မှာ ယောက်ျား၊ မိန်းမ ရေချိုးခန်းခွဲထားတယ်။ အဖေကြီး ရေချိုးရင်သုံးတဲ့ ရေခွက်၊ ဆပ်ပြာ၊ သတ်သတ်ခွဲထားရတယ်။ မိန်းမတွေ ယူမသုံးရ။ ယောက်ျားလေးတွေလာလည်ရင် ဘယ်လောက် ငယ်ငယ် အမေကြီးက သူအမြင့်မှာ ထိုင်နေရင် ချက်ချင်း ထပြီး ဖယ်ပေးတယ်။ အိမ်ကို ကိုယ်တို့ သူငယ်ချင်း ယောက်ျားလေးတွေ လာလည်လို့ အချင်းချင်းပြောင်နောက်ပြီး ကောင်စုတ်လို့ ပြောမိရင်၊ ခြေထောက်နဲ့ရွယ်မိရင် အမေကြီးက ကိုယ့်နဖူးကို ဒေါက်ကနဲ ခေါက်လိုက်တာပဲ။ ယောက်ျားလေးတွေကို ဘာလို့ မရိုမသေလုပ်ရတာလဲတဲ့။ အဲသာများ အခု မေမေလည်း အဲသလို အတူတူပဲ။ အဲသာကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေက ကိုယ့်ကို စိတ်မဆိုးဆိုးအောင်စ... ကိုယ်ကစိတ်ဆိုးလို့ တခုခု လုပ်မယ်ကြံရင်... ဒီမှာ အန်တီ... အနော်တို့ကို ကောင်စုတ်လို့ ပြောပါတယ်။ ခြေထောက်နဲ့ရွယ်ပါတယ်လို့ တိုင်ကြတယ်။
ကိုယ်တို့ မောင်နှမတတွေ တခုခု မဟုတ်တာလုပ်ရင် အဖေကြီးက စိတ်တိုတတ်သူပီပီ တွေ့ရာတုတ်တချောင်းနဲ့ဆော်လေ့ရှိပြီး၊ အမေကြီးကတော့ မသိသလို တရားစောင်း ဟောလေ့ရှိတယ်။ သူဟောတဲ့ တရားစောင်းက များသောအားဖြင့် လူကြီးစကားနားမထောင်လို့ နောင်ဘ၀ ချေးကြုံးတဲ့ အမျိုးမှာ ၀င်စားတတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ အဆုံးသတ်လေ့ရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် အဆူခံရတာတွေကတော့ မောင်နှမတွေ ရန်ဖြစ်ကြလို့ရယ်၊ စကားအကျယ်ကြီးပြောမိတာတွေရယ်၊ အာပြဲကြီးနဲ့ ရီမိတာတွေပေါ့။ အမေကြီးက ပြောတယ်။ မိန်းကလေးဆိုတာ ချစ်သနားဖွယ်လေးဖြစ်အောင် နေတတ်၊ ထိုင်တတ်၊ ပြောတတ်၊ ဆိုတတ် ရတယ်တဲ့။ ခုတော့ နင်တို့စကားပြောနေကြတာ နားထောင်ရတာ ဘာကိုမှ နားမလည်ဘူး။ ခွေးတွေ ၀ိုင်းကိုက်နေကြသလိုပဲတဲ့လေ။
အခု... ဒီစည်းကမ်းတွေ ပြောပြလို့ ဒေါ်စုချစ်တို့ အဲသလို လိုက်နာတယ်လို့တော့ မထင်ကြပါနဲ့။ ဟီး...။ အဖေကြီး၊ အမေကြီးတို့ သွန်သင်သလို တသွေမတိမ်းဖြစ်မလာခဲ့ပေမဲ့၊ အဖေကြီး အမေကြီးတို့ ဆိုဆုံးမခဲ့တာလေးတွေကိုတော့ ခုထိ မမေ့မလျော့ နားထဲကြားယောင်ဆဲ... သူတို့ ကိုယ့်နားမှာမရှိပေမဲ့ သူတို့မကြိုက်တာလေးတွေ လုပ်မိရင် အလိုလို စိတ်ထဲ တွန့်တွန့်သွားနေဆဲဆိုတာတော့ ၀န်ခံရပါမယ်။
ဘွားဘွားကြီး၊ အဖေကြီး၊ အမေကြီးတို့ကို ဤစာဖြင့် ရိုသေစွာ ကန်တော့လိုက်ပါတယ်။
Posted by စုချစ် at 10/23/2009 09:49:00 PM7comments: Links to this post
၄၇နှစ်မြောက် ကိုမင်းကိုနိုင် (ခ) ကိုပေါ်ဦးထွန်း မွေးနေ့
My Dearest Brother Ko Min Ko Naing
အစ်ကိုကြီးကိုမင်းကိုနိုင်ကို ၁၉၈၉ခု မတ်လ(၂၃)ရက်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ(၁၉)ရက်တွင် ထောင်မှပြန်လွတ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၆ခု စက်တင်ဘာ(၂၇)ရက်တွင် ထပ်မံဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ၂၀၀၇ခု ဇန်န၀ါရီလ(၁၁)ရက်တွင် ပြန်လည်လွတ်လာခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၇ခု သြဂုတ်(၂၁)ရက်ညတွင် ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရပြီး ထောင်ဒဏ် (၆၅)နှစ် ကျခံနေရပါသည်။
ယခုတဖန် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာမည့်ရက်မြတ်အား စောင့်စားမျှော်လင့်လျက်....
အစ်ကိုကြီး ကိုမင်းကိုနိုင် စစ်တွေထောင်တွင် စပ်ဆိုခဲ့သော ကဗျာတပုဒ်
Posted by စုချစ် at 10/18/2009 01:27:00 PM 1 comment: Links to this post
Some say, life begins at four-O.
you will begin new chapter of life starting from today.
But I know you are aging like fine wine!
I wish you be enjoy real peace, real harmony and real happiness.
I haveasurperb birthday present for you!!!!!
I will let you win an argument……………………….!!!!!
Happy Birthday four-O.
Posted by စုချစ် at 10/16/2009 09:04:00 AM7comments: Links to this post
Posted by စုချစ် at 10/14/2009 09:47:00 AM No comments: Links to this post
မြန်မာစာပေသမိုင်းတွင် ဗန်းမော်ဆရာတော်နှင့် သီလရှင်မယ်ကင်းတို့၏ အကြောင်းမှာ အထင်ရှားဆုံးသော စာဆိုနှစ်ဦးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တဦးနှင့်တဦး စာချိုးကြရာမှာ အညှာမပေးတတ်သော ကဗျာပဂေးနှစ်ဦးဖြစ်၍၎င်း၊ ''ဂမ္မဒေါသ'' သင့်အောင်ပင် စာစပ်ကြသောကြောင့်၎င်း၊ ဗန်းမော်ဆရာတော်နှင့် သီလရှင်မယ်ကင်းတို့ သတင်းမှာ ယနေ့တိုင်ထင်လင်းနေပေသေးသည်။
ဗန်းမော်ဆရာတော်သည် ဘုန်းကြီးလောကတွင် ထင်ရှားခဲ့သလောက် သီလရှင်မယ်ကင်းမှာလည်း သီလရှင်လောကတွင် အလွန်ထင်ရှားသော ဆရာတဆူအဖြစ် ဂုဏ်ရှိန်ကြီးမားသော ပုဂ္ဂိုလ်တဦးပင်ဖြစ်သည်။ သီလရှင်မယ်ကင်းဟု အဖျားဆွတ်၍ လွယ်လွယ်ပင်ခေါ်ခဲ့ကြသော်လည်း အမှန်မှာ ဆရာကြီး ဆရာကင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကစ္စည်းသဒ္ဒါကြီး၊ သင်္ဂဟနှင့် ဋီကာကျော်များ၊ အဋ္ဌသာလိနီ အဋ္ဌကထာနှင့်၊ သမ္မောဟ ၀ိနောဒနီ အဋ္ဌကထာများ၊ ည၀ါနှင့် အဋ္ဌကထာများ သင်ကြားတတ်မြောက်ခဲ့သူဖြစ်ပေသည်။
သီလရှင်မယ်ကင်းမှာ ကသည်းလူမျိုးဖြစ်သည်။ ငယ်ဖြူဖြစ်၍လူမှုကိစ္စအ၀၀တို့နှင့် ကင်းကွာခဲ့လေသည်။ ငယ်စဉ်ကပင် စာပေပရိယတ် လေ့လာလိုက်စားမှုကိုသာ အစဉ်မပြတ် အချိန်ရှိသမျှ သင်ကြားခဲ့ခြင်းကြောင့် ထိုခေတ်ထိုအခါတွင် စာတတ်ပေတတ်စာရင်းတွင် ပေါ်လွင်ထင်ရှားခြင်းဖြစ်လေသည်။
စစ်ကိုင်းတောင် ဂူတလုံးချောင်တွင် တောရဆောက်တည်နေထိုင်၍ ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်ထံတွင် ည၀ါနှင့် အထကဋ္ဌာများ သင်ကြားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လည်းဆရာကင်းသည် မိမိသင်ကြားတတ်မြောက်သည့် ပညာများကို သီလရှင်တပည့်များနှင့် ၀ါသနာပါသူ လူဝတ်ကြောင်မိန်းကလေးများကို သင်ကြားပို့ချ၍ပေးခဲ့လေသည်။ ပရိယတ္ထိစာပေ သင်ကြားပို့ချသည့်အတွက်လည်း ကျောက်ထီးကန္တု အလေးပြုအပ်သည့် ဆရာကြီးတဆူအနေဖြင့် စာတတ်ပေတတ်သီလရှင်အများအပြားကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီး သီလရှင်လောကကြီး စည်ပင်ပြန့်ပွားအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေသည်။
ထိုမှတပါးလည်း သုဓမ္မာဝင်ဖြစ်သည့် ရှမ်းကလေးကျွန်းဆရာတော်သည် ဆရာကင်း၏မောင်အရင်းဖြစ်သည်။ ရှမ်းကလေးကျွန်းဆရာတော် အရှင်နန္ဒမှာ သုဓမ္မာဝင်ဆရာတော်များထည်းတွင် ကျော်ဇောထင်ရှားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်သည်။ မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး၏ လေးစားကြည်ညိုမှုကို ခံယူရသည်။ ထိုရှမ်းကလေးကျွန်းဆရာတော်၏ ၀ိနိစ္ဆယပြန်တမ်းအတွက် ဗန်းမော်ဆရာတော် ဗန်းမော်မြို့သို့ အပို့ခံရခြင်းဖြစ်သည်။
ဆရာကင်းသည် မင်းတုန်းဘုရင် ကြည်ညိုလေးစားသောရှမ်းကလေးကျွန်းဆရာတော်၏ အစ်မအရင်းဖြစ်၍တကြောင်း၊ ကိုယ်တိုင်ကလည်း စာတတ်ပေတတ် ပုဂ္ဂိုလ်အကျော်ဖြစ်၍တကြောင်း သီလရှင်သာသနာကို ကြီးမားပြန့်ပွားအောင် ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်၍တကြောင်း မင်းတုန်းမင်းသည် ဆရာကင်းကို အလွန်ပင်လေးစားလေသည်။
စစ်ကိုင်းချောင်တွင် ကျော်ဇောထင်ရှားသည့် သီလရှင်ကြီးတပါးရှိသေးသည်။ ထိုသီလရှင် ဆရာကြီးမှာ ဆရာမယ်နတ်ပေးဖြစ်သည်။ ဆရာမယ်နတ်ပေးသည် ပဋိပတ္တိ ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာဘက်၌ ကြိုးပမ်းအားထုတ် တရားပြသမှုတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသည်။ ၁၂၂၁-ခုနှစ်တွင် ဆရာကင်းနှင့် ဆရာမယ်နတ်ပေးတို့ကို နေပြည်တော်သို့ ပင့်ဆောင်လေသည်။ မင်းတုန်းမင်းကြီး ပင့်ဆောင်သည့်အခါတွင် ဆရာကင်းတို့က မင်းတုန်းမင်းထံ ကတိသုံးချက်တောင်းခံသည်။
၁။ မိမိသည် မိန်းမသားဖြစ်၍ ဆရာတော် သံဃာတော်များကို ရိုသေလေးစားရပါမည်။ သို့ဖြစ်၍ ပြဿာဒ်၊ ဘုံဆောင်အဆင့်ပါသည့် ကျောင်းဇရပ်များ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်းမပြုပါရန်။
၂။ မည်သည့်ဘွဲ့တံဆိပ်တော်မှ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းမပြုပါရန်။
၃။ ဆွမ်းဝတ် ဆွမ်းအုပ်များ မလှူဒါန်းရန်တို့ ဖြစ်သည်။
ဤကတိသုံးချက်ရသဖြင့် နေပြည်တော်သို့ လိုက်ပါခဲ့လေသည်။ နန်းတွင်းရှိ မိဖုရားများ၊ သမီးတော်များ၊ နန်းတွင်းသူများကို စာပေပရိယတ္ထိ ပို့ချပေးလေသည်။ ဆရာကင်းသည် နန်းတွင်းနန်းပြင်၌ ထင်ရှားသည့် ရှမ်းကလေးကျွန်း ဆရာတော်နှင့် ဆရာကင်းတို့မှာ မောင်နှမလည်းဖြစ်၍ မင်းတုန်းဘုရင်အပေါ် သြဇာသက်ရောက်၍ မင်းနှင့်အကျွမ်းတ၀င်နေကြသဖြင့် အချို့သော ဆရာတော် သံဃာတော်များမှာ လိုလား နှစ်သက် ကြဟန်မရှိပေ။ ထိုအထဲတွင် ဗန်းမော်ဆရာတော်က ထိပ်တန်းက ပါနေမည်မှာ မလွဲပေ။ ဗန်းမော်ဆရာတော်၏ ပင်ကိုယ်သဘောကပင်လျှင် အခွင့်ထူးခံသူများ၊ ဘုရင့်အနီးတွင်နေပြီး ဘုရင့်စိတ်ကြိုက် လိုက်၍နေသူများကို ရွံရှာမုန်းတီးသည့်သဘော ရှိပေသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ဆရာကင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ဗန်းမော်ဆရာတော်သည်အညှာမပေး။ ပက်ပက်စက်စက် ရက်ရက်စက်စက် တွယ်လေ့ရှိပေသည်။ မြန်မာစာပေတွင် ဗန်းမော်ဆရာတော်နှင့် သီလရှင် မယ်ကင်းတို့၏ အပြန်အလှန်စာချိုးများမှာ ထင်ရှားလှပေသည်။
တခါတွင် သီလရှင်ဆရာကင်းက သံဝေဂတေးထပ် တပုဒ်ကိုရေးစပ်လေသည်။ ထိုတေးထပ်မှာ...
မထိတ်သာ စိတ်ရဲလို့ မိတ်ဖေါ်လဲမပါ၊
ပုတီးနှင့် အပြီးပါတယ်၊ မညည်းရာဈာန်ရိပ်နှင့်၊
ဆရာကင်း၏အထက်ပါတေးထပ်ကို ဗန်းမော်ဆရာတော်တွေ့သောအခါတွင် အောက်ပါအတိုင်း အရွဲ့တိုက်၍ ရေးလိုက်လေသည်။
ဗလာကျင်းဝတ်ထည်ကို ချွတ်မယ်လို့ ကုန်ဖွင့်၊
မြူရွေ့ဟန် ဆိုတဲ့ အကျင့်။
မန်းသေလာတောင်မြင့်မှ ဖေါ်မလင့် ဧကစာ၊
တောခတယ် မယ်ကင်းတဲ့လေး။ ။
အထက်ပါတေးထပ်နှစ်ပုဒ်မှာ အချိန်ကာလ ဖေါ်ပြထားခြင်းမရှိပေ။ အချို့ကဆိုကြသည်။ ဤတေးထပ်နှစ်ပုဒ်အကြောင်းမှာ ဗန်းမော်ဆရာတော်နှင့် သီလရှင်မယ်ကင်းတို့ ပျိုရွယ်စဉ်က အပြန်အလှန် ရေးခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ ဗန်းမော်ဆရာတော်နှင့် သီလရှင်မယ်ကင်းတို့ ငယ်စဉ်က ပညာသင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ တဦးနှင့်တဦး ရည်ငံခဲ့ကြဟန်တူသည်။ ဗန်းမော်ဆရာတော်လောင်းက ပဉ္စင်းတက်မည်ရှိသောအခါ သီလရှင်မယ်ကင်းထံ ''ဘယ်နှယ်လဲ ပဉ္စင်းတက်ရတော့မှာလား'' ဟုမေးသည်ဆိုသည်။ ထိုအခါ သီလရှင်မယ်ကင်းက အထက်ပါတေးထပ်ဖြင့် အကြောင်းပြန်လိုက်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုအခါ ဗန်းမော်ဆရာတော်လောင်း မောင်ပဉ္စင်းလောင်းက စိတ်နာနာနှင့် ပြန်လည်ချေပသော တေးထပ်ဖြစ်သည်ဟု အဆိုရှိခဲ့သည်။
Posted by စုချစ် at 10/14/2009 09:41:00 AM 1 comment: Links to this post
ရုံးက သူငယ်ချင်း မလေးတရုတ်မလေးက ပြောတယ်။ ခုတလော သူ အရမ်းစိတ်ပင်ပန်းတာပဲတဲ့။ အလုပ်လုပ်ရတာ စိတ်ဓါတ်တွေကျတယ်...စိတ်မပါဘူး... နေရထိုင်ရတာလဲ မပျော်ဘူး ... စိတ်ညစ်တယ်တဲ့။
ဘာဖြစ်လို့လဲ... ရုံးမှာအလုပ်တွေ မနိုင်မနင်းများနေလို့လား၊ ဘော့စ် ဒါမှမဟုတ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ကတောက်ကဆဖြစ်သလား၊ သားသမီးတွေက ပြောစကားနားမထောင်လို့လား၊ စာမေးပွဲကျလို့လား၊ ကိုယ့်လူကြီးမိဖ တစ်ယောက်ယောက်နေမကောင်းဖြစ်နေလို့လား၊ ယောက်ျားနဲ့ အဆင်မပြေလို့လား၊ ငွေရေးကြေးရေးပူစရာရှိသလား၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေသလား... စတာတွေ မေးကြည့်တော့ ..ဟင့်အင်း... ခါတိုင်းလို.. ပုံမှန်ပဲ... ဘာမှ မထူးခြားဘူး... ရုတ်တရက် ဖီလင်က ဖြစ်လာတာ... နေရတာ မပျော်တာ သက်သက်တဲ့...။ မနက်မိုးလင်း မျက်စိနှစ်လုံးပွင့်လာ မနက်စာပြင် ရုံးကိုလာ ရုံးအလုပ်တွေလုပ်၊ အချိန်တန် ရုံးဆင်းတော့ အိမ်ပြန်၊ ကလေးတွေ စာသင်၊ ယောက်ျားခူးခပ်ကျွေး၊ ပိတ်ရက်ကျတော့ အိမ်ရှင်း၊ ကိုယ့်ဘ၀အတွက် ဘာမှမလုပ်ရပဲ ဒီလို လည်ပတ်နေတာကြီးကို မုန်းလာ၊ ငြီးငွေ့လာ၊ ဘ၀ကြီးကို ပျင်းလာတာတဲ့.. နင်ကော အဲသလိုမဖြစ်ဘူးလားတဲ့။
ကိုယ်ကပြုံးနေလိုက်တယ်။ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မဖြစ်အောင်နေတယ်... ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် မပျင်းအောင်၊ စိတ်ဓါတ်မကျအောင် နေရတယ်လို့...။ တခါတလေ သူငယ်ချင်းတွေထဲကလည်း အဲသလို ပြောတာမျိုးတွေ ကြားရတတ်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်တို့က ကလေးမရှိတော့ နင်တို့ ၂ယောက်ထဲ နေရတာ မပျင်းဘူးလားလို့ မေးတာ ခဏခဏ ကြုံရတယ်။ သူ့မိန်းမနဲ့ ခဏခဏ စကားများတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဆို ငါသာ နင်တို့လို ကလေးမရှိရင် ငါ့မိန်းမနဲ့ ကွဲတာကြာပြီတဲ့။
သူတို့ကို အသေးစိတ်တော့ ရှင်းပြမနေ၊ ဖြေမနေတော့ဘူးရယ်။ လူဆိုတာ ကိုယ့်ဘ၀အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ကာ သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ယှဉ်ပြီးပြောနေလို့မရဘူး။ ကိုယ်နေရတာ ပျင်းတိုင်း၊ စိတ်ညစ်တိုင်း သူများတွေလဲ အဲသလိုပဲနေမယ်လို့ ထင်နေမဲ့သူကိုလည်း နားလည်စွာနဲ့ ငြိမ်နားထောင်ပေးရတတ်တယ်။
တကယ်က ကိုယ်တို့ဘ၀မှာ ပျင်းချိန်တောင်မရှိဘူး။ ကိုယ်က ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် ၀ါသနာပါတယ်။ မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး ငြိမ်နေချင်တဲ့သူမှုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ ဘ၀မှာ ပုံမှန် အလုပ်တွေနဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ကြားထဲက စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေ၊ ကိုယ့်အတွက်၊ လောကအတွက် အကျိုးရှိမယ်ထင်တာလေးတွေကို လျှောက်လုပ်တတ်တယ်။
ပန်းချီဆွဲတယ်။ စာရေးတယ်။ သီချင်းဆိုတယ်။ အိမ်နားက ဒုံမင်းတီးတဲ့ အန်ကယ်ကြီးအိမ်မှာ စိတ်ရတဲ့နေ့ဆို ရှေးသီချင်းတွေသွားသွားဆိုကြ တီးကြတယ်။ အေးအေးဆေးဆေး လမ်းသလားချင်ရင် ယောက်ယောက်နဲ့ ၂ယောက်သား ဆန်တိုစာဖြစ်ဖြစ်၊ အိစ်ကုပ်မှာ ဖြစ်ဖြစ် လမ်းလျှောက်ကြတယ်။ ကျောက်ဆောင်မှာထိုင်၊ ပင်လယ်ရေတွေကြည့်ရင်း နေကြာစေ့ဝါးတယ်။ ပြီးရင် စက်ဘီးစီးတယ်။
ကုသိုလ်ရေးအတွက်ကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဝေယျာဝစ္ဆသွားလုပ်ပေးတယ်။ တခါတခါ ဘာမှလုပ်စရာမရှိလို့ ပျင်းနေတယ်ထင်ရင် ဘုန်းကြီးကျောင်း ကုဋီတွေသွားဆေးတယ်။ ပိတ်ရက်တွေတရားကျောင်းမှာ တရားသွားထိုင်တယ်။ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ တရားစခန်းဖွင့်ရင် သူတို့ဆီ တရားသွားထိုင်တယ်။ ရံဖန်ရံခါ တရားနာတယ်။ အချိန်ရရင်တရားစခန်းတွေမှာ အကူလိုက်လုပ်ပေးတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၀က်ပေ့ခ်ျ၊ ပိုစတာ လုပ်တာ တာဝန်ယူထားတယ်။
ရုံးဗော်လန်တီယာအဖွဲ့ကနေ ကလေးတွေစာလိုက်သင်တယ်။ နေမကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်း၊ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ မိဖတွေ ဆေးခန်းပြစရာလိုအပ်ရင် အကူလိုက်ပေးတယ်။ ဗိုက်ကြီးသည် သူငယ်ချင်းတွေ စားချင်တာလှမ်းပြောရင် ချက်ပြီးသွားပို့ပေးတယ်။ စီဗီရေးခိုင်းတဲ့သူ၊ အလုပ်စာကူရေးခိုင်းတဲ့သူတွေကို ကူညီတယ်။
ဖိုရမ်ထဲ စာရေးတယ်။ ဘလော့လေးလုပ်ထားတယ်။ ဂျီတော့နဲ့ ဟိုလူ ဒီလူတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြ၊ နောက်ကြ၊ ပြောင်ကြတယ်။ စိတ်ဆိုးစရာတွေ မဖြစ်အောင် တတ်နိုင်သမျှရှောင်တယ်။
အဲဒီတော့ ကိုယ့်ဘ၀မှာ အလုပ်နဲ့ အိမ် ၂မျိုးထဲ မဟုတ်ပဲ စိတ်ဝင်စားစရာ၊ ပျော်စရာ၊ အကျိုးရှိမယ်လို့ ကိုယ်ယူဆထားတဲ့ အရာပေါင်းများစွာနဲ့ အားချိန်မရှိ လည်ပတ်နေလို့ ကိုယ့်ဘ၀ကြီးက တသမတ်ထဲ သွားနေတယ်လို့ မယူဆ၊ ပျင်းချိန်တောင်မရဘူး။
မြန်မာပြည်လွမ်းတာနဲ့ အိမ်ကလူကြီးမိဖတွေ သတိရတာကလွဲလို့၊ ဒီနှစ်ထဲ ကျန်းမာရေးကြောင့် စိတ်အနှာက်အယှက် အနည်းငယ် ဖြစ်ရတာလေးကလွဲလို့ ဘာမှ စိတ်ညစ်စရာမရှိ၊ ပျင်းချိန်မရ။
ယောက်ယောက်က ကိုယ်လျှောက်လုပ်သမျှ ဘာကိုမဆို အနောက်ကနေ မငြီးမငြူ ပံ့ပိုးပေးတယ်။ အလုပ်လုပ်ရတာလည်း တော်ရုံနဲ့တော့ မငြီးငွေ့ဘူး။ ပျင်းစိတ်ဝင်လာရင် ဒီအလုပ်လေးရှိနေလို့ ဒီပိုက်ဆံလေး ကိုယ်ရနေတာ...။ ဒီပိုက်ဆံလေးရနေလို့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ကိုယ်လျှောက်လုပ်လို့ရတာ။ ကိုယ့်မိဖတွေ ကန်တော့နိုင်တာ။ ကိုယ်လှူချင်တာ လှူနိုင်တာ။ အလုပ်ကိုမငြီးငွေ့တဲ့အပြင် ကျေးဇူးတောင်တင်သေးတယ်။
အဲ... မနက် အိပ်ရာထတာကတော့ ပျင်းတယ်။ တခါတခါ ညမိုးချုပ်ထိနေမိလို့ မနက်ရုံးအသွားမှာ အိပ်ရေးကမ၀ဘူး။ ယောက်ယောက်က ဟိုတုန်းက ဖေဖေ ကိုယ့်ကို ကျောင်းလိုက်ပို့သလိုမျိုး။ ကိုယ့်ရုံးအိတ်နဲ့ သူ့ရုံးအိတ်ကိုပုခုန်းတဖက်မှာရောလွယ်၊ သူ့အတွက်နဲ့ ကိုယ့်အတွက် ရုံးထမင်းဘူးအိတ်တွေကို လက်တဖက်ကကိုင်၊ လက်တဖက်က ကိုယ့်လက်ကိုဆွဲ.. မနက်၇နာရီ၁၅မိနစ်ဆို ရုံးသွားကြဖို့ ကားဆီကို အိမ်က အတူထွက်ကြတယ်။
သူ့ရဲ့နွေးထွေးတဲ့လက်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ မနက်ခင်းဟာ အိပ်ရေးမ၀လို့ နောက်ကျိနေတဲ့၊ ပျင်းနေတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကို နေ့သစ်အတွက် ခွန်အားရှိအောင် အားအင်သစ်တွေ လောင်းထည့်ပေးသလိုပဲ။
ကဲ... ဘယ်မှာလဲ... ပျင်းချိန်... စိတ်ညစ်ချိန်....
(ယောက်ယောက်သို့... ၈နှစ်မြောက်မင်္ဂလာ အမှတ်တရ... )
Posted by စုချစ် at 10/09/2009 08:37:00 PM 11 comments: Links to this post
We are happy to extend an invitation on SMC 5th Kathina Robe Offering Ceremony on 11th October 2009, Sunday at9am.
Our group (Myanmar Cupid Singapore Community) is going to prepare big money tree to offer in Kathina day.
I will be offering Butter rice and chicken curry to all devotees in Kathina day. Also there is food fiesta in Kathina day, offering different kinds of Burmese foods to everybody such as, Mote Hin Khar, Nan Gyi Thote, Shwe Yin Aye, Burmese tea, Burmese semolina, etc.
Programme on 11 October 09 (Sun)
8.45 am All sponsors to be seated
9.00 am The Venerable Sangha take their seats
Taking of5precepts by the devotees
Offering of Kathina robes and requisites by the main sponsor followed by devotees
11.00 am Sanghikadana – Offering of lunch to the Sangha
40 Jalan Malu-Malu, Sembawang Springs Estate
MAP --> http://www.smcmeditation.org/SMC_map.htm
Please come and participate in this meritorious offering ceremony with us.
Posted by စုချစ် at 10/08/2009 10:01:00 AM No comments: Links to this post
''သီတင်းကျွတ်ညလေးတည ပြန်လည်ကာ သတိရမိပါတယ်''
မနေ့က သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၁ရက်နေ့မှာ ဘုရားမီးပူဇော်ပြီး တအိမ်လုံး ရေချိုးခန်း၊ မီးဖိုချောင်၊ အိပ်ခန်းတွေကအစ...ဖယောင်းတိုင်မီးခွက်လေးတွေ ထွန်းတယ်။ ပြီးတော့ လျှပ်စစ်မီးတွေပိတ်ပြီး ဖယောင်းတိုင် မီးရောင်လေးတွေနဲ့ နေကြတာ အိမ်လေးက လှလိုက်တာ၊ ကျက်သရည်ခငြောင်းလိုက်တာဆိုတာ...။ ဒီတခါ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့က ပိတ်ရက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်လို့ ဥပုသ်လေးရသွားတယ်။
ညကဘုန်းကြီးကျောင်းကအပြန်မှာ ညီမလေးက ကိုယ်တို့ ၂ယောက်စလုံးကြိုက်တဲ့ ဒိုးနတ်မျိုးစုံမုံ့ဘူးကြီးနဲ့ သီတင်းကျွတ်ကန်တော့တယ်။ အိမ်ကယောက်ယောက်က ကိုယ်ကလွဲရင် သူ့ကို ဘယ်သူမှ ကန်တော့တာမခံဘူးတော့ ဘာဆုပြန်ပေးရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်....။ ညီမလေးက အစ်ကိုကြီး နဲ့ မမလတ်ကို ကန်တော့ပါတယ်လည်းပြောရော... ပြုံးပြုံး...ပြုံးပြုံးနဲ့... အေး..နင်ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေတဲ့...။ ဟာ...မှားနေပြီလေ... ဟိုက ကန်တော့နေတာ..ဆိုတော့မှ အေး..ဟုတ်သားဆိုပြီး ရီပြီး ဘာပြောရမယ်မှန်းမသိ ခေါင်းတွေကုပ်နေတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ညီမလေးအတွက် သေချာဆုမွန်ကောင်းလေးပေးလိုက်တယ်။
ကိုယ်တို့မိသားစုမှာ ငယ်ငယ်လေးကတဲက ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ကန်တော့ကြတာ အလေ့အထမို့ ကိုယ်တို့အတွက်တော့ ကန်တော့တာ၊ အကန်တော့ခံရတာ မဆန်းဘူး။ ညတိုင်း ဘုရားရှိခိုးပြီးတာနဲ့ အဖိုး၊ အဖွား၊ အဖေ၊ အမေကို ကန်တော့ပြီးမှ အိပ်ရတယ်။ ပြီးရင် မောင်နှမတွေ ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ကန်တော့ကြတယ်။ ကျောင်းသွားခါနီးတိုင်း၊ အပြင်ထွက်ခါနီးတိုင်း ဘုရားကန်တော့၊ လူကြီးတွေ ကန်တော့ပြီးမှ ထွက်ကြရတယ်။
သီတင်းကျွတ်ဆိုရင် လပြည့်နေ့မှာ တအိမ်လုံးဥပုသ်စောင့်ကြရတယ်။ လပြည့်ကျော်၁ရက်နေ့ကြမှ မုံ့တွေ၊ သစ်သီးတွေကို ဗန်းတွေထဲထည့်ပြီး အင်္ကျိလှလှပပလေးတွေဝတ်လို့ လူကြီးမိဖတွေကို လိုက်ကန်တော့ကြရတယ်။ ပြီးရင် တန်ခိုးကြီး ဘုရားတွေကို သွားရောက်ဖူးမြှော် ဆီမီးပူဇော်ကြတယ်။ အဲသာကတော့ ကိုယ်တို့မိသားစုရဲ့ သီတင်းကျွတ်တေးသံပဲ။
စင်ကာပူကို ထွက်မလာခင် နောက်ဆုံးနှစ်က ယောက်ယောက်နဲ့ ရည်းစားဖြစ်ပြီး ၂လလောက်အကြာ သီတင်းကျွတ်လကိုရောက်လာတော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့နဲ့ သူ့မွေးနေ့က အဲဒီနှစ်မှာ တိုက်ဆိုင်နေတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း မန်းလေးသီတင်းကျွတ်ဆိုတာကလည်းအရမ်းကိုစည်တာ။ အဲဒီနေ့က သူနဲ့ နှစ်ယောက် ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ မန်းလေးက သွားလို့ရနိုင်သမျှ နေရာစုံ ဘုရားသွားဖူးပြီး ဘုရားဝင်းတွေမှာ ဆီမီးပူဇော်ကြတယ်။
တိမ်ကင်းစင်တဲ့ မီးခိုးပြာရောင်ရင့်ရင့် မိုးကောင်းကင်ကြီးပေါ်က ပြည့်ပြည့်ဝန်းဝန်း လမင်းကြီးက ပြုံးပြီးငုံ့ကြည့်နေသလို...လောကကြီးက အေးချမ်းသာယာလို့။ ဘုရားရိပ် တရားရိပ်ကလည်း ငြိမ်းအေးချမ်းမြေ့လို့...။ ရင်ထဲမှာ အတိုင်းမသိ ကြည်နူးရတာ ခုပြန်တွေးမိလိုက်တိုင်းပဲ။ ဘုရားရှိခိုးဆုတောင်းပြီး ဖယောင်းတိုင်မီးလေးတွေကို ဘုရားရင်ပြင်တော်မှာ ပတ်ပတ်လည် မီးပူဇော်ကြရတာ.. အရမ်းကိုပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ တွေးမိတိုင်းလည်း လွမ်းဆွတ်သတိရမိတယ်။
အဲဒီနှစ်က ယောက်ယောက်ကို ပုဆိုး၊ ဖိနပ်တို့နဲ့ ကန်တော့တယ်။ သူက မထင်မှတ်ဘဲ ကန်တော့ခံရလို့ အံ့တွေသြပြီးရှက်နေသေး.. ဆုကလည်းမပေးတတ်တော့... ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းမသိ ခေါင်းတွေကုပ်ပြီး... ပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့.. ကျေးဇူးဘဲတဲ့။ နောက်တော့ သူ့အိမ်ကလူကြီးတွေကြိုက်တတ်တဲ့ စားစရာမုံ့တွေဝယ်ပေးလိုက်ပြီး ကိုယ်စားကန်တော့ခိုင်းလိုက်သေးတယ်။
တကယ်က မြန်မာပြည် သီတင်းကျွတ်ကိုပြန်ချင်တာ အရမ်းပဲ။ တချို့က မြန်မာနှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်ဆိုရင် မြန်မာပြည်ပြန်ချင်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ ကိုယ်ကတော့ နှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်ထက် မြန်မာပြည်သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်တိုင်တွေကို ပိုလွမ်းတယ်။
တွေးလိုက်တိုင်း နောက်နှစ်သီတင်းကျွတ်တော့ ပြန်ဖြစ်အောင် ပြန်မယ်..ပြန်ဖြစ်အောင် ပြန်မယ် လို့ ရည်ရွည်ရင်းနဲ့ပဲ သီတင်းတွေလည်းကျွတ်ပေါင်းများခဲ့ပြီ။ ကိုယ်လည်း မြန်မာပြည် သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်တိုင်နဲ့ ဝေးခဲ့တာ ၁၂နှစ်တိုင်ခဲ့ပါပြီ။
Posted by စုချစ် at 10/05/2009 01:09:00 PM9comments: Links to this post
Labels: Remembrance, Talk
ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် ပရိယတ္တိ ပဋိပတ္တိနှင့် ပြည့်စုံ၍ မင်းတုန်းဘုရင်ကြီးက အလွန်ပင် ကြည်ညို ကိုးကွယ်ထားသော်လည်း မန္တလေးနေပြည်တော်တွင် နေတော်မမူဘဲ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးရှိ ပိတောက်ချောင်တွင် အရည၀ါသီ တောမှီ ကျင့်သုံးတော်မူသည်။
ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်မှာ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား ဟောကြား ပြသရာတွင် အလွန်နာမည်ကြီးလှ၍ တောရမှီသည့် ယောဂီများနှင့် သီလရှင်များပါ ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်နှင့် နီးရာတွင် ဇရပ်များ ဆောက်လုပ်၍ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်နေကြသည်။
ဗန်းမော်ဆရာတော်လည်း ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်နှင့် မနီးမဝေးပိတောက်ချောင်တွင်ပင် သီတင်းသုံးသည်ဖြစ်ရာ ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်ထံ မကြာခဏ အဖူးအမျှော် ရောက်ခဲ့လေသည်။ ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်မှာ ဗန်းမော်ဆရာတော်ထက် ၀ါတော်ကြီးသည်ဖြစ်၍ ဗန်းမော်ဆရာတော်က ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်းဗန်းမော်ဆရာတော်၏ အမြင်တွင် သီလရှင်များဝိုင်းရံနေသော အဖြစ်ကို မမြင်လို မကြည့်လိုပေ။ သို့သော် သက်ကြီးဝါကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၍ အောင့်အီး၍နေရပေသည်။ ၀ါသနာဆိုသည်ကားစွန့်ခဲလှပေသည်။ ဗန်းမော်ဆရာတော်၏ ၀ါသနာကို သိခဲ့ပြီးအတိုင်းပင် မျက်စိထဲ အမြင်မတည့်လျှင် စာချိုးချင်သောဝါသနာ၊ ပစ်စာပစ်လိုသော ၀ါသနာမှာ ဒွန်တွဲ၍ နေလေသည်။
ထို့ကြောင့်ပင် တနေ့တွင် ဗန်းမော်ဆရာတော်က အောက်ပါအတိုင်း စာချိုး၍ ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်၏ ကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့ ညအခါ တိတ်တဆိတ် စာပစ်၍ထားခဲ့သည်။
ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်၏ကျောင်းအနီးသို့ ချထားသောစာချိုးကို နံနက်စောစော တံမြက်လှဲသော ကိုရင်ကြီးက ကောက်ရသဖြင့် ဖတ်ကြည့်ပြီး ဆရာတော်အားဆက်ကပ်လေသည်။
ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်သည် ထိုစာချိုးကို ဖတ်ရှုပြီး ကိုရင်ကြီးအား...
''ဗန်းမော်ဆရာတော်ကို ငါက ဆွမ်းစားပင့်တယ်လို့ လျှောက်ချေပါကွယ်'' ဟု မိန့်တော်မူလိုက်သည်။
ကိုရင်ကြီးသည် ဗန်းမော်ဆရာတော်ထံ သွားရောက်လျှောက်ထားရာ ''အေး..အေး...ငါ အခုလာခဲ့မယ်'' ဟုပြောဆိုလိုက်ပြီး ချက်ခြင်းပင် နောက်ကလိုက်၍သွားလေသည်။ ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော် ကျောင်းပေါ် သို့ ရောက်လေလျှင် ဗန်းမော်ဆရာတော်က ၀တ်ဖြည့်၍ ရိုသေစွာထိုင်သည့်အခါ ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်က...
''ဘယ်နှယ်လဲ ကိုဗန်းမော် ကျုပ်ကို သီလရှင်တွေနဲ့ ပြောင်လှောင်ပြီး စာချိုးတာလား''
''သီလရှင်တွေနဲ့ စွပ်စွဲတာ မဟုတ်ပါဘုရား၊ ဆရာတော်အပေါ် အကြည်ညို သဒ္ဓါပွား၍ စာချိုးမိကြောင်းပါ ဘုရား''
''သယ်... မင်းက စကားလွှဲပြောပြန်ပြီ၊ ဦးရွှေညို သီလချောရယ်နဲ့ဆိုတာ ငါ့နံမည်က ဦးရွှေညိုဆိုတော့ ငါ့ကိုသီလရှင်ချောချောနဲ့ ပေးစားပြီး စာချိုးတာ မဟုတ်လား''
''မဟုတ်ရပါဘုရား... သီလချောဆိုတာ အရှင်ဘုရား၏ သီလတော် စင်ကြယ်ချောမွတ်ခြင်းကို ရည်ရွယ်စပ်ဆိုခဲ့တာပါဘုရား''
ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်က ပြုံးတော်မူ၍ ''တန်စမ်းပါ ဗန်းမော်ရယ်.. မင်းဆိုလိုတာ ဒါ မဟုတ်ပါဘူး၊ မင်း ငါ့ကို နှစ်စွယ်နှစ်ဝ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ စကားနဲ့ စပ်ထားတာ မဟုတ်လား'' ဟု မေးမြန်းလေမှ ဗန်းမော်ဆရာတော်လည်း ခတ်ပြုံးပြုံးလုပ်၍ နေလေတော့သတည်း။
Posted by စုချစ် at 10/01/2009 12:24:00 PM4comments: Links to this post
ဗန်းမော်ဆရာတော်သည် သီလရှင်များနှင့်ပါတ်သက်၍ သဘာဝ ကဗျာတပုဒ်ကို စပ်ဆိုထားခဲ့သေးသည်။ ထိုကဗျာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
သူဝတ်လေ ဖြူဆွတ်ကယ် လျှော်တေပ၊
တောထွက်ကြီး စာမပီ၍ ဖွဲ့ဆိုသောကဗျာ
စစ်ကိုင်းပိတောက်ချောင်တွင် သီတင်းသုံးနေခိုက် ဗန်းမော်ဆရာတော်၏ကျောင်းသို့ တောထွက် ဦးပဉ္စင်းကြီးတပါး ရောက်ရှိနေလေသည်။ ထိုဦးပဉ္စင်းကြီးအမည်မှာ ဦးကဲဟူ၍ လူဘ၀ကအမည်ကိုပင် ခေါ်ကြသည်။ ဦးကဲသည် လူဘ၀တွင်ရှိစဉ်က စာပေပရိယတ္တိ သင်ကြားဘူးခြင်းမရှိပေ။ ထို့ကြောင့်လည်း အသက်ကြီးမှ ရဟန်းပြုသောအခါ၊ ပုဒ်-ပါဋ္ဌ် အက္ခရာများကို မှန်အောင်မရွတ်နိုင်ဘဲ ရှိလေသည်။ အထူးအားဖြင့် ရ-ကောက်သံကိုပီအောင် မရွတ်နိုင်ဘဲ ယ-ပက်လက်အသံသာ ထွက်နေသည်။ (တိသရဏေန)ကို အကြိမ်ကြိမ်သင်ပေးသော်လည်း (တိသဏေန) ဟူ၍ ယပက်လက်သံချည့်သာဖြစ်နေသည်။
ဗန်းမော်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်မရလျှင် မနေဟု ထို (တိသရဏေန) ကိုပင် ထပ်ခါတလဲလဲ ရွတ်ဆိုစေ၍ သင်ကြားပေးရာ သင်ကြားစဉ်ကအခါက ရ-ကောက်သံနှင့်ရွတ်နိုင်သော်လည်း နောက်တနေ့တွင် ယ-ပလက်အသံနှင့်သာ ဖြစ်လာပြန်သည်။ ငယ်စဉ်ကပင် နှုတ်ကြိုး၍ ယပလက်အသံကိုသာ စွဲ၍နေရာ ဗန်းမော်ဆရာတော်သည်ပင်လျှင် လက်လျှော့ရတော့သည်။
သို့သော် ၀ါသနာကြီးလှသော စာချိုးခြင်းဖြင့် တောထွက်ဦးပဉ္စင်းကြီး ဦးကဲအား မှတ်တမ်းတင်လိုက်သည်။
တိသရဏကို (သယဏ) လို့ သူကဆို၊
(ဦးကဲနှင့်ပါတ်သက်၍ ဆရာတော်ဟောကြားသော ပုံပြင်ကို နောက်ပိုင်း ပုံပြင်အခဏ်းတွင် ရှုပါ) ။
Posted by စုချစ် at 10/01/2009 12:21:00 PM No comments: Links to this post
ရွှေကျင်ဆရာတော်နှင့် သင်္ဂဇာဆရာတော်တို့ကို စာချိုးခြင်း
ဤခေတ်တွင် သင်္ဂဇာဆရာတော် ဦးအဂ္ဂနှင့် ရွှေကျင်ဆရာတော်တို့နှစ်ပါးမှာ ပရိဝါသ်-မာနတ် ၀တ်ပြုမှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အယူအဆသဘောထားကွဲလွဲနေကြသည်။ ဘုရားကြီးဆရာတော်၊ စလင်းဆရာတော်၊ သက်ပန်းဆရာတော် စသည်ဖြင့် ဆရာတော်ကြီးများက ၀င်ရောက်ဖြန်ဖြေကြသည်။
ရွှေကျင်ဆရာတော်နှင့် သင်္ဂဇာဆရာတော်တို့မှာ နှစ်ပါးစလုံး စာတတ်အကျော်အမော်များ ဖြစ်ကြလေရာ၊ နှစ်ဘက်စလုံးကမိမိတို့ အယူအဆမှန်ကန်ကြောင်း အကိုးအကား အထောက်အထား ခိုင်လုံစွာတင်ပြကြလေသည်။ နှစ်ဘက်စလုံးမှာလည်း အခိုင်အမာများဖြစ်သော်လည်း တပါး၏တင်ပြချက်ကို တပါးကလက်မခံ၊ တပါး၏အကိုးအကားကို တပါးကမကြိုက်ဖြင့် အညီအညွတ်မဖြစ်ဘဲ ရွှေကျင်ဂိုဏ်း၊ သုဓမ္မာဂိုဏ်းဟူ၍ ရွှေကျင်ဆရာတော်နှင့် သင်္ဂဇာဆရာတော်တို့ နှစ်ဘက်သံဃာများ ဂိုဏ်းကွဲလုမတတ်ရှိနေတော့သည်။
ဗန်းမော်ဆရာတော်သည် ဤအချက်ကိုမြင်ပြင်းကပ်လှသည်နှင့် စာတပုဒ်ချိုး၍ ဘုရားကြီးဆရာတော်ထံ အပို့လွှတ်လိုက်လေသည်။ ရွှေကျင်ဆရာတော်မှာ မန္တလေးတောင် မြောက်ဘက်၌ သီတင်းသုံးတော်မူသည်။ သင်္ဂဇာဆရာတော်၏ဘွဲ့အမည်မှာ ဦးအဂ္ဂဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင်...
ဟူ၍စာစပ်ပေးလိုက်ရာ ဘုရားကြီးဆရာတော်က ပြုံးရယ်တော်မူပြီး ''ဗန်းမော်တို့များ ဘယ်ဟာမှ ချန်မထားဘူး မြင်မြင်သမျှ စာချိုးတော့တာဘဲ'' ဟု မိန့်တော်မူလေသည်။
ဗန်းမော်ဆရာတော်သည် စစ်ကိုင်းသို့ ရောက်နေသော်လည်း စာချိုးမှုတွင် ၀ါသနာအရ အလျှော့ပေးသည်မရှိပေ။
တချိန်တွင် ဆရာတော်သည် ဦးပဉ္စင်းနှစ်ပါးနှင့်အတူ ပိတောက်ချောင်မှ ဆင်း၍လာရာ သီလရှင်များနေထိုင်သော ဇရပ်များကို တွေ့လေသည်။ ထိုဇရပ်များပေါ်တွင် ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကျောင်းတိုက်မှ သီလရှင်တို့ နေထိုင်ကြလေသည်။
ထိုစဉ်ကာလက စစ်ကိုင်းချောင်မှာ လူသူစည်ကားခြင်းမရှိသေးပေ။ တောရမှီသော ပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင်ရှိကြလေသည်။ သို့ဖြစ်၍ လူအသွားအလာနီးသော ဇရပ်များပေါ်တွင် နေထိုင်ကြသည့် သီလရှင်များမှာ လူတို့သဘာဝ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေကြဟန်တူသည်။ အိပ်သူကအိပ်၊ အလုပ်လုပ်သူကလုပ်၊ စကားပြောသူကပြောနှင့် ရှိနေကြသည်ကို ဗန်းမော်ဆရာတော်သည် အဝေးမှလှမ်းမြင်မိပေသည်။ ကဗျာရှင် စာရှင် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်၍ စာချိုးလိုက်ချင်သည်မှာ အူယား၍နေတော့သသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ဦးပဉ္စင်းနှစ်ပါးကိုစောင့်၍ သစ်ပင်အောက်မှ ရပ်ကာ ...
''ဟေ့... ဟိုမှာကြည့်စမ်း၊ ထွဋ်ခေါင်ရဲ့ ကြက့်ဖြူမတွေ'' ဟုမိန့်ကြားလိုက်ပြီး...
''နားထောင်ကြအုံးကွာ၊ ငါစာတပုဒ် ချိုးလိုက်အုံးမယ်''
ဟုဆိုကာ အောက်ပါစာတပုဒ်ကို ရေးလိုက်သဖြင့် ဗန်းမော်ဆရာတော်၏သမိုင်းမှတ်တမ်းဝင် စာတပုဒ်ဖြစ်၍ လာလေသတည်း။
ဤကဗျာမှာ ဟာသရသ ကဗျာ ဖြစ်သည်။ ကြားရသူတို့ အတွက် ရွှင်မြူးစေရသော ကဗျာမျိုးဖြစ်သည်။
Posted by စုချစ် at 10/01/2009 12:13:00 PM No comments: Links to this post